မင်းလှ လယ်သမားများ ရေနံသူခိုးများရန် ကြောက်နေရ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းလှမြို့နယ်အတွင်းရှိ ထန်းကိုင်းကျေးရွာမှ ဒေသခံများပိုင် လယ်ယာမြေများကို မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ( MOGE ) မှ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း ရေနံခိုးတူးကြသူများကြောင့် ဒေသခံများအနေဖြင့် လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ၀င်ရန် အခက်တွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒေသသို့ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့သော ဧရာဝတီသတင်းထောက်ကို ဒေသခံ ၁၅ ဦးက ပြောပြသည်မှာ ထန်းကိုင်းကျေးရွာ လယ်ယာမြေများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်က MOGE မှ သိမ်းယူခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့် အကျိုး တူပူးပေါင်းကာ ရေနံတူးဖော်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဒေသခံလယ်သမားများထံသို့ ရေနံမတူးပဲ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ ပြန်လုပ်ရန် ကတိက၀တ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း ထိုလယ်ယာမြေများတွင် နဂိုကတည်းက တူးထားသော ရေနံတွင်းပေါက်များရှိသောကြောင့် ညပိုင်းလာရောက်ခိုးတူးကြသည့် တခြားဒေသခံများက တွင်းပေါက်များ မပိတ်ရန် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုကြသောကြောင့် လယ်ပြန်မစိုက်နိုင် ဖြစ်နေရကြောင်း သိရသည်။
ထန်းကိုင်းရွာ ဒေသခံ ဦးစံသောင်းက “ MOGE က လယ်ယာမြေတွေပြန်ပေးတာမှာ တွင်းပေါက်ကို ကိုယ့်ဘာသာပိတ်ရမယ်တဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ ပိတ်တော့လည်း တခြားရွာတွေက လာတူးတဲ့သူတွေက ပိတ်ရဲပိတ်ကြည့်၊ ပိတ်တဲ့ရွာကို ရေနံတွေပတ်ပြီး မီးတိုက်မယ်လို့ ကြိမ်းတယ်။ ရွာအချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထန်းကိုင်းရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားထားသလို မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ စာပေးပို့ ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုစာပေးပို့လိုက်သည့်အတွက် ယခုအချိန်တွင် လယ်ယာမြေများကို ထွန်ယက်ရန် ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား ကြောင်း သိရသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး MOGE သို့ သွားရောက်မေးမြန်းရာတွင် ဒေသခံများပြောဆိုနေချက်က မှန်ကန်ကြောင်း၊ ညဘက် ရေနံလာတူးသူများကြောင့် မိမိတို့ ရုံးပတ်ဝန်းကျင်ပင် လုံခြုံမှုမရှိပဲ မီးလာရှို့မည့်အရေးကို စိုးရိမ်နေရကြောင်း၊ ထန်းကိုင်း ရွာရှိ လယ်ယာမြေများတွင် လာရောက်ရေနံတူးကြသူများကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နေသည့် ပုံစံမျိုးရှိနေကြောင်း ထန်းကိုင်းရွာရှိ MOGE လုပ်ငန်းမှ လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ ဦးဝင်းမောင်က ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားလိုက်သည်။
“ကျနော်တို့ ဘာမှ တားဆီးလို့ မရဘူး။ ကျနော်တို့ ကင်းတဲလေးတခုကိုတောင် ညဘက် မီးလာရှို့ခဲ့သေးတယ်။ ဒါ့ ကြောင့် ကိုယ်ရုံး လုံခြုံရေးအတွက်ပဲ အဓိကထား နေရတယ်။ အခုတောင် ထန်းကိုင်းရွာခံတွေနဲ့ တခြားရွာက လာတူးကြ တဲ့သူတွေ ပြဿနာမဖြစ်အောင် လယ်ယာမြေထွန်ယက်ဖို့ ခဏ တားထားရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ညဘက်ရေနံလာတူးကြသူများသည် ထန်းကိုင်းရွာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရွာ ၆ ရွာခန့်အပြင် ထန်းကိုင်းရွာနှင့် ၇ မိုင်ကျော်ဝေးသော ရွာများမှလည်း လာရောက်တူးကြကြောင်း သိရသည်။
ထန်းကိုင်းရွာ လယ်ယာမြေများတွင် ရေနံခပ်နေကြသော တွင်းပေါင်း ၄၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး တွင်းအသစ်များလည်း ထပ်မံတူး ဖော်နေကြကြောင်း တွေ့ရသည်။
လာရောက်တူးဖော်ကြသူများသည် ညနေ ၃ နာရီကျော်တွင် တဖွဲဖွဲ စတင်ရောက်ရှိလာပြီး မနက်မိုးလင်းသည့်အထိ တူးဖော်ကြကာ မနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ လယ်ယာမြေ အနီးရှိ ရေနံဝယ်ယူကြသူများကို ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ကြောင်း တွေ့ရ သည်။
“ အဲဒီလို တရားမ၀င် လာတူးကြတဲ့အတွက် ဓားခုတ်မှု ဖြစ်ခဲ့တာလည်း ၃ ကြိမ်လောက်ရှိပြီ။ တဲလေးတွေကို မီးရှို့တာ လည်း ၂ ကြိမ်ရှိပြီ။ ညဘက်ဆိုရင် အိပ်တောင်မအိပ်ရဲဘူး။ ကျနော်တို့ လယ်ယာမြေတွေထဲမှာ ဒီလို တူးနေကြတာ ကျနော်တို့လည်း လယ်ယာအလုပ်မလုပ်ရ၊ ကိုယ်မြေကထွက်တဲ့ သယံဇာတလည်း ကိုယ်က အကျိုးမခံစားရနဲ့ဗျာ ” ဟု ထန်းကိုင်းရွာသား ကိုတင်မြင့်သိန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မင်းလှမြို့နယ်အတွင်း ရေနံထွက်ရှိသော ရေနံမှော်ပေါင်း ၁၀၀ ၀န်းကျင်မျှ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း၊ တချို့မှော်များသည် MOGE နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသလို၊ တချို့မှော်များသည် တရားမ၀င် တူးဖော်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရေနံမှော်များကိုသာ လိုက်လံတူးဖော်နေကြသည့် မင်းလှမြို့နယ်၊ တောင်ဦးရွာ ဒေသခံ ၁၀ ဦးက ဧရာဝတီသို့ အတည်ပြုပြောကြသည်။
ထိုသို့ တရားမ၀င် တူးနေကြသူများအနေဖြင့် မင်းလှမြို့နယ်အတွင်းရှိ တခြားရေနံမှော်များလို လုပ်ခွင့်ပေးလျှင် ပိုမိုကောင်းမည်ဟု ထင်ကြောင်း၊ လယ်ယာမြေရှင်များနှင့် အကျိုးတူ မိမိတို့အနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ကြောင်း မင်းလှမြို့ နယ်၊ တောင်ဦးရွာက ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ထန်းကိုင်းရွာ လယ်မြေများတွင် တရားမ၀င် တူးဖော်ကြသူအများစုမှာ တစ်ရက်လျှင် ရေနံတွင်း ၁ တွင်းမှ ပျမ်းမျှ ၅ ဂါလံဆန့် ပုံး ၁ လုံးကျော်မျှသာ ရရှိကြပြီး တွင်းတတွင်းအတွက် လုပ်သား ၅ ဦးကျော်မျှ ရှိသောကြောင့် တဦးလျှင် နေ့စဉ် ၀င်ငွေ ၂ ထောင်ကျပ်ဝန်းကျင်သာ ရရှိကြကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ ခိုးတူးတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းပြောရရင် တူးတဲ့သူ တဦးချင်းက သိပ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်စီး ပွားဖြစ်သွားတာက ရေနံကုန်သည်တွေပဲ။ ဒီလိုတူးလို့ ရွာခံတွေအချင်းချင်း စကားများကြရုံပဲ ရှိတာ။ တခြားနေရာက ရေနံ မှော်တွေလိုပဲ လွတ်လွတ်လပ်လုပ် လုပ်ခွင့်ပေးရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ ရွာတရွာနဲ့ တရွာ ရန်ဖြစ်စရာလဲ မရှိတော့ ဘူးပေါ့ ” ဟု တောင်ဦးရွာ ဒေသခံ ရေနံတွင်းတူးသမားတစ်ဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး မင်းလှမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ သွားရောက်မေးမြန်းသည့်အခါ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အထက်သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အထက်မှ ညွှန်ကြားချက် အမြန်ဆုံးရရှိရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ အထက်ညွှန်ကြားချက် ရသည်နှင့် ထိုပြသနာကို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
This entry was posted on May 16, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် “ဝ” တောင်းဆိုမှု လွှတ်တော် တင်ပေးမည်
အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခများအားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း-၁ ( ဦးအောင်ထူး- ရှေ့နေ) →